Bangi, adeegyada bangiga iyo adeegyada lacagta lagu bixiyo ee dijitaalka ah | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Dhaqaale, lacag iyo xisaabaadka / Bangi, adeegyada bangiga iyo adeegyada lacagta lagu bixiyo ee dijitaalka ah
Halkan waxaad ka akhrin kartaa wixi dheeraad ah ee ku saabsan bangiga, kaarka bangiga, bangiga intarnatka iyo adeegyada lacagta lagu bixiyo ee dijitaalka ah. Adigu waxaad xitaa ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan BankID iyo sida ay u shaqayso in la lacagta lagu bixiyo aabyada moobilka.
Waa inaad haysataa xisaab bangi si aad u maarayso dhaqaalahaaga gaarka kuu ah. Xisaabta aad u baahantahay waxay lahaan kartaa magacyo kala duwan tusaale ahaan xisaab mushahaaro, xisaab xawilaad, xisaab shakhsiyan ah, xisaab gaar ah ama xisaabta lacag bixinta. Wax macno ah ma laha magaca xisaabta. Ta muhiimka ahi waa inaad awooddo helista adeegydan soo socda:
Lacagta ku bixi oo arrimaha bangiga ku maaraa moobilka
Waa caadi in qofku arrimahiisa bangiga iyo lacag bixinaha ku sameeyo telafoonka moobilka. Haddii aanad telafoonka moobilka taas ugu isticmaalin horey way yara adkaan kartaa in la bilaabo. Waxaa jira tilmaamayaal fiican oo laga eegto sida looga isticmaalayo dhinaca iPhone iyo telafoonada Android ah. Tilmaamayaashan waxay tallaabo, tallaabo u guud marayaan sida aad u soo dejisan karto ee u bilaabi karto BankID iyo Swish iyo sida sida aad u bilaabayso lacag bixinaha iyadoo la adeegsanayo caawimaada telafoonkaaga moobilka.
Tilmaamaha in lagu hagaajiyo iPhone kaaga oo loo soo dejisto aabka bangiga, mobilt bankID och Swish.
Tilmaamaha in lagu hagaajiyo Android kaaga oo loo soo dejisto aabka bangiga, mobilt bankID och Swish.
Buug yar looguna talogalay adigaaga doonaya inaad wax dheeraad ah ka barato wixi ku saabsan lacag ku bixinta kaar, bangiga intarnatka iyo lacag bixinaha dijitaalka ah.
Akhri dheeraad ku saabsan sida Bank ID u shaqeeyo kuna qoran bogga BankID.
Akhri dheeraad ku saabsan isticmaalka BankID kuna qoran bogga BankID.
Dheeraad ku saabsan Swish waxaad ka akhrin kartaa bogga intarnatka ee swish.nu.